तपाईंको ग्राफिक प्रोजेक्टहरूको लागि फोटोशपको साथ एक यथार्थवादी फोटोपोन्टेज सिर्जना गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
Un फोटोशपको साथ यथार्थवादी फोटोमोंटेज यो त्यस्तो चीज हो जुन यो लामो कार्यक्रमको साथ लामो समयसम्म गरिएको छ जुन हामीलाई छविहरूसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै यो जादू हो। कि त शौक वा कामको लागि, Photoshop offers धेरै यथार्थवादी परिणामहरू सबै प्रकारका तस्बिर रिचचिंगका लागि। केहि आधारभूत धारणा मास्टर गर्न सिक्नुहोस् आफ्नै यथार्थपरक मोनेटेजहरू सिर्जना गर्नुहोस्.
तपाईंको आफ्नै फोटोमन्टेजहरू सिर्जना गर्नुहोस् रचनात्मक सबै प्रकारका छविहरू संयोजन गर्दैaव्यावसायिक ग्राफिक उपकरण डिजाइनरहरू, फोटोग्राफरहरू र ग्राफिक कलाकारहरू द्वारा प्रयोग गरिएको। सबैभन्दा धेरै प्रचार आज यो यी प्रविधिको साथ गरिन्छ र परिणामहरू अविश्वसनीय छन्। यसले फरक पार्दैन यदि तपाईं एक पेशेवर हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं खुशीको लागि गर्नुहुन्छ, तपाईं फोटो मोनेटिजहरू सिर्जना गर्न र एक कलाकार बन्न सिक्न सक्नुहुन्छ।
Para एक फोटोमोंटेज सिर्जना गर्नुहोस् हामीलाई चाहिने पहिलो कुरा भनेको एउटा हो दिमागमा विचार पछि यसलाई विकास गर्न ग्राफिक फारम। इन्टरनेटमा असंख्य सन्दर्भहरू छन् जहाँ हामी सबै प्रकारका कलाकारहरू भेट्न सक्छौं जुन हामीलाई प्रेरणा दिन्छन्, एउटा फोटोमन्टेजमा राम्रो। जोएल रोबिन्सनयस कलाकारको फोटोमेन्टगेसमा आधारित काम छ जहाँ उसलेfलाई जोड्योडिजिटल रीचिंगको साथ ओटोग्राफी (अत्यधिक प्रेरणाको लागि सिफारिश गरिएको)। तपाईं यसमा केहि देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठ.
एक पटक हामीसँग विचार छ, हामी के गर्न लागेका छौं अर्को कुरा यसलाई ग्राफिकल रूपमा विकास गर्नुहोस्.
यदि सम्मेलनको साथ भइरहेको छ भने आफ्नै फोटोग्राफहरू हामीले थाहा पाउनु पर्छ केही आधारभूत पक्षहरू जसले गर्दा सम्मेलनको यथार्थपरक परिणाम हुन्छ। यदि तिनीहरू इन्टर्नेटबाट छविहरू हुन् भने, हामी के गर्छौं केहि खोज्नु हो जुन यी आधारहरूसँग अनुपालन गर्दछ।
को ख्याल राख्नुहोस् परिप्रेक्ष्य
साथ फोटोग्राफहरू ब्यूएना calidad
को ख्याल राख्नुहोस् बत्ती
यी चार पोइन्टहरू एक राम्रो फोटोमन्टेज बनाउनका लागि आवश्यक छन्, हामी प्रत्येकलाई अझ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नेछौं।
परिप्रेक्ष्यको ख्याल राख्नुहोस् यो हाम्रो फोटोमन्टेज हुनु आवश्यक छ यथार्थवादतार्किक रूपमा, सबै मोन्टेज छविहरूको समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ, यद्यपि यो हामीले गरिरहेका परियोजनामा ​​निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि हामी सीधा अगाडी हेरिरहेको व्यक्तिलाई कवच राख्नको लागि मोन्ट्याज बनाउन चाहन्छौं, सहि कुरा यो हो कि हाम्रो छविहरूसँग समान लन्डल परिप्रेक्ष्य छ।
को फोटोग्राफहरू हुनै पर्छ उही गुण ताकि फ्यूजन सकेसम्म यथार्थपरक हो। प्रोजेक्टमा निर्भर गर्दै, हामी छविहरूमा अधिक गुणस्तर राख्न चाहान्छौं वा गर्दैनौं, उदाहरणका लागि एक धमिलो पृष्ठभूमि उपयोगी हुन सक्दछ यदि यो हामीले खोजिरहेका छौं भने।
La बत्ती त्यो हासिल गर्न आवश्यक छ यथार्थपरक स्पर्श हाम्रो ग्राफिक परियोजनामा। जब हामीसँग फोटो शूट गरिरहेका हुन्छौं प्रकाशको बिन्दुमा हेर्नुहोस् यदि हामी घर बाहिर छौं भने प्रत्यक्ष सूर्यबाट बच्दै। यदि मोन्टेजका लागि हाम्रो इन्टर्नेट छविहरूमा ओभरहेड लाइटिंग छ (माथिबाट) हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि हाम्रो सत्रमा प्रकाशमा त्यो ओभरहेड शैली पनि छ।
त्यसकारण हामीले राम्रो फोटोमन्टेज सिर्जना गर्न हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो सबै विवरण राम्ररी योजना गर्नुहोस्।
हामीले हाम्रो सुरु गर्‍यौं फोटोशपमा फोटोमोंटेज सबै छविहरू खोल्दै।
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सुरू हो क्रप छविहरू, यसको लागि हामी कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्छौं फोटोशप चयन उपकरण:
लूप (चुम्बकीय, बहुभुज, नि: शुल्क)
एकचोटि हामीले छविहरू काट्यौं भने, अर्को कुरा हामीले गर्न गइरहेका हुनेछौं तिनीहरूलाई हाम्रो फोटोमन्टेज क्षेत्रमा जुन हामी जाँदैछौं। सबै छविहरू मिलाउनुहोस्.
अर्को चरण हो छविहरूको शारीरिक विशेषताहरू समायोजित गर्नुहोस्: प्रत्येक छवि को स्थिति, मापन ... आदि। हामी प्रत्येक छवि राख्छौं जहाँ यो दृश्य भागमा केन्द्रित नगरी जान्छ, हामी केवल भौतिक भाग समायोजन गर्दछौं आधार संरचना सिर्जना गर्न। सर्टकट नियन्त्रण + टी यो छविहरूको आकार समायोजन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एकचोटि हामीले छविहरू समायोजित गरेपछि, हामीले गर्नुपर्ने भनेको अर्को कुरा मिलान रंग, यसको लागि हामी उपकरण प्रयोग गर्नेछौं रंग सन्तुलन। हामीले यो जान्नुपर्दछ कि प्रत्येक छविको एक छ रंग कास्ट विशिष्ट र यसैले हामीले दुबै र colorsहरूसँग मिल्नुपर्दछ कि हामीले खोजेको वास्तविकतामा पुग्न।
हामीले गर्नैपर्छ हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो छवि को प्रमुख रंग हो आधार सबै छविहरूमा र color मिलाउन सक्षम हुन, यो सामान्य तरीकाले छविमा हेरेर गर्न सकिन्छ। यस उदाहरण फोटोको मामलामा, रंग प्रमुख रातो छ।
एक पटक हामीले रंग सच्याएपछि, निम्न छ सही प्रकाश र कन्ट्रास्ट। यो गर्न हामी अर्को चमक र कन्ट्रास्ट समायोजन तह सिर्जना गर्दछौं जसले हामीलाई मद्दत गर्दछ मिलान प्रकाश हाम्रो मोन्टेज को छवि बीच।
हामी प्रयोग गर्न सक्छौं अन्य समायोजन तहहरू प्राप्त गर्न अधिक यथार्थवादी परिणाम: स्तर समायोजन तह, छनौट सुधार समायोजन तह, तीव्रता समायोजन तह, आदि।
एक पुग्न चाल गुणस्तर फोटोमोंटेज भनेको सबै समयमा राम्रोसँग योजना बनाउनु हो र माथिका सबै पक्षहरूलाई हेर्दै काम गर्नु हो। प्रोजेक्टको बारेमा सोच्नुहोस्, यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् र यसलाई पूरा गर्नुहोस्। हाम्रो मात्र सीमितता आफ्नै कल्पना हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशप प्रयोग गरेर यथार्थपरक फोटोमोंटेज सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको आफ्नै फोटोशप ब्रशेस बनाउनुहोस्